Torohevitra hankafizanao ny diany miaraka amin'ny alikao | Alika Manerantany
Araka ny efa noresahintsika tamin'ny tranga hafa, ny fampihetseham-batana isan'andro dia tena ilaina amin'ny fiadanan'ny alika. Betsaka ny tombony azo avy amin'izy ireo ny mandeha, na ara-batana na ara-tsaina, ary mihamafy ireo raha ny tompony mankafy ity hetsika ity amin'ny ambaratonga mitovy amin'izy ireo. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba izany.
1. Safidio ny vozon'akanjo sy tady mety. Izy io dia lakilen'ny fitadiavana ireo kojakoja mety indrindra ho an'ny biby fiompintsika, izay ahafahantsika mifehy tsara azy io fa tsy miteraka fahasimbana. Eo amin'ny tsena dia mahita safidy tsy manam-petra izay hahatonga ny alika hahatsapa ho mahazo aina; raha tsy izany, dia tsy samy afaka mankafy ny mitaingina.
2. Fehezo ny hetsika. Tokony ho fantatry ny alika fa isika no manapa-kevitra hoe rahoviana no manomboka ny diany, aiza no alehantsika ary rehefa miverina mody isika. Io dia ny fahitana fifandanjana eo amin'ny fahalalahan'ny biby sy ny andraikitsika amin'ny maha-mpitarika antsika. Noho izany dia zava-dehibe ny ampianarantsika azy hiara-mandeha amintsika, tsy misy jerena, manaja ny baikontsika. Ary tsy navelantsika hamaha azy mihitsy izy raha tsy amin'ny toerana mihidy no voatokana manokana ho an'ity tanjona ity.
3. Fiaraha-miasa. Ny alika sasany dia sahirana mifanerasera amin'ny alika na olona hafa, na noho ny tahotra, ny traikefa ratsy na ny antony hafa. Ny zavatra tsara indrindra tokony hatao rehefa misy ireo olana amin'ny fitondran-tena ireo dia ny mankany amin'ny mpampiofana matihanina; ho hainy ny milaza amintsika izay tokony hatao hamahana azy.
4. Manomàna fandaharam-potoana. Tsy maintsy misafidy ny fotoana mety indrindra amin'ny dia ianao. Ny tsara indrindra dia ny mandeha intelo isan'andro: zavatra voalohany amin'ny maraina (hamelana ny alika hamelatra ny hozatra), 20 minitra hafa aorian'ny fisakafoanana (mampiroborobo ny fandevonan-kanina) ary iray hafa alohan'ny hatory (hanampiana azy hampihavana ny nofinofiny. ). Na izany aza, azontsika atao ny manova kely io fandaharam-potoana io arakaraka ny toetrandro, hisorohana ny ora mafana indrindra amin'ny fahavaratra ary hanararaotana azy ireo amin'ny ririnina.
5. Ento ny kojakoja ilaina. Soso-kevitra ny manomana kitapo kely na kitapo misy zavatra mety ilaintsika mandritra ny dia an-tongotra. Ohatra, kitapo plastika manokana hanangonana fako, ary koa tavoahangy misy rano velona, ​​indrindra amin'ny fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Torohevitra hankafizanao ny diany miaraka amin'ny alikao
Tsy fahazakana sakafo amin'ny alika
Antony 5 mahatonga ny alikanao hilelaka anao